पूर्ण रुपमा यौन सन्तुष्टि कसरी लिने ? :: Hello NEPAL KOREA dot com ::
पूर्ण रुपमा यौन सन्तुष्टि कसरी लिने ?
यदि तपाईको यौन साथीले पूर्ण रुपमा यौन आनन्द प्राप्त गरेको कुरामा तपाईं विश्वस्त हुनुहुन्न भने सोच्नुस् माया छ भन्दैमा तपाई उसको मनको सबैकुरा पढ्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन । यद्यपी माया छ भने उसको शरीर र उसको सोचाइ कसरी आनन्दीत हुन्छ भन्ने कुरा केही हदसम्म थाहा हुन सक्छ ।
तपाई आफ्नो यौन साथीलाई यौनसम्पर्कको लागि पूर्ण रुपमा तयार चाहानुहुन्छ भने तपाईले चुम्बनको स्पर्शबाट शुरुवात गर्नुस् । तपाई सोझै यौनाङ्गतिर आकर्षित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको महसुस नगराउनुस् । प्रेमस्पर्श पाखुरा, पछाडिको भाग हुँदै खुट्टातिर पनि हल्का र मुलायम भुवाको जस्तो स्पर्श गर्नुस् । अनुहार, ओठ, कान, घाँटीमा चुम्बन गर्दै जानुस् ।
जब तपाई र तपाईको यौन साथी दुवैजनाको अङ्गप्रत्यङ्ग पूर्ण रुपमा सक्रिय भएको अनुभव गर्नुहुन्छ तब तपाई पूर्ण रुपमा योनाङ्गतर्फ प्रवेश गर्नुस् । छातीमा, पछाडिको अङ्गमा, तिघ्रामा, भित्री तिघ्रामा सपर्श बढाउँदै जानुस् । योनीको बाहिरी भागमा लिङ्गले धक्का दिनुस् र फेरि बाहिर निकाल्नुस् । यस अवस्थासम्म पुरुष पूर्ण रुपमा उत्तेजनामा आइपुगेको हुन्छ । र अब बिस्तारै यौनसम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुस् । एजेन्सी
ईपीएस भाषा परीक्षा अक्टुबरमा, यस बर्ष ८ हजार २ सय नेपालीलाई उत्तीर्ण गर्ने (238514 views)सातौ कोरियन भाषा परिक्षाको नतिजा प्रकाशित, ३५१७ जना उर्तिण (96850 views)इपिएस कामदारलाई दुःखीत तुल्याउने गरेर कोरियन सरकारले ल्यायो नयाँ निर्देशिका, तलबबाट २०% सम्म कम्पनीले कटौति गर्न पाउने (83460 views)आठौ कोरियन भाषा परीक्षा असार पहिलो हप्ता सञ्चालन गरिने (74325 views)कोरियामा अर्को दुःखद खबर, रोजगारीका लागि आएको तीन महिना नबित्दै एक नेपालीको सुतेकै अवश्थामा मृत्यु (73421 views)एका विहानै दुःखद खबर, कोरियामा शुक्रबार नेपाल जाने तयारीमा रहेका नेपाली युवकले शौचालयमा झुण्डिएर गरे आत्महत्या (71635 views)